Goobaha Kubadda Cagta ee Bulshada ee Bulshada - Codes-ka Online Casino Bonus
Casino Online Xeerarka Bonus > Goobaha Isboortiga Bulshada ee Bulshada
(534 votes, celcelis ahaan, 4.00 out of 5)
Goobaha casino ee martigelinaya cayaartoyda Bulgaria
Iska hubi liiska goobaha casino ee aqbalaya ciyaartoyda ka imaanaya Bulgaria waxayna bixiyaan cayaaro tayo sare leh oo ammaan ah. Halkan waxaad ka heli doontaa waxyaabo badan oo madadaalo ah oo ka soo jeeda mashiinnada xayawaanka si aad ugu noolaato ciyaaraha casriga ah ee ka soo jeeda sida iibiyeyaasha software-yada ah sida NetEnt, Merkur, IGT, Novolin, Microgaming, Betsoft, Rival Gaming iyo kuwo kale oo badan.
Waxa kale oo aad dib u eegi kartaa boggeena internetka casino ee casriga ah si aan u joogtayno abid ugu wanaagsan oo ah kor u qaadida internetka, gunnooyinka iyo hababka lacag bixinta ee laga heli karo ciyaartoyda Bulgaria.
Bulgaariya ayaa soo jiidata dalxiisayaal ma ahan oo kaliya xeebaha ciidda, laakiin sidoo kale leh meelo kala duwan oo xiiso leh. Si farxad weyn u ah dalxiisayaasha iyo dadka deegaanka ah, khamaarista Bulgaria waa sharci. U fiirso kuwa soo booqda liistada boggeena internetka ee ciyaaraha khamaarka ee casinos ee dalka ugu weyn caasimadda Sofia, iyo sidoo kale goobaha caanka ah ee caanka ah. Hey'adda xakamaynta khamaarka ee sharci-dejinta ee dalka waa Guddiga Khamaarka Dawlad Goboleedka, oo ay sameeyeen Wasaaradda Maaliyadda ee Bulgaariya. Dukumiinti rasmi ah oo sharciya khamaarka waddanku waa sharci cusub oo ku saabsan khamaarista waddanka Bulgaria, kaas oo dhaqan galay Janaayo 1, 2017.
Khamaarka online ee Bulgaria
Khamaarka online ee Bulgaria waa sharci. Shaqaalaha caalamiga ah waxay u baahan yihiin inay helaan ruqsad si ay u qabtaan howlaha khamaarka ee dhulka dalka. Laga bilaabo Jannaayo 2017, waxaa jira goobo badan oo khamaaris online ah oo ku yaal Bulgaria - laga soo bilaabo casinos-online-ka oo ku socda barta internetka. Magacyada ugu caansan waa Pokerstars, bet365, bwin iyo betfair.
Liistada Meelaha 10 Bulshada ee Bollywoodka Online
Bulgaariya waa waddan soo jiidata dalxiisayaal leh fasax qurxoon oo ku yaalla Badda Madadaalada, goobaha barafka lagu ciyaaro iyo casinos. Isku-darka adeega aadka u fiican iyo qiimaha dimoqraadiyadeed ayaa dalkan ka dhigaya shay ka mid ah dareenka kordhaya ee dalxiisayaasha ka socda adduunka oo idil. Howsha casriyeynta CasinoToplists waa in la ogaado sida ay wax u jiraan khamaarka iyo casinos online ee Bulgaria hadda.
Khamaarista iyo sharciyada ka timid 1979 ilaa 2017;
Khadka internetka ee shirkadaha caalamiga ah waa inay haystaan ​​ruqsadda Bulgaariya. Inta kale waa la xakumay;
Haddii uusan taleefanka caalamiga ah uusan xirneyn, waad cayaari kartaa. Laakiin khatartaada (waa la xakameyn karaa);
Casinos xayawaan ah sida xeerka hoteelada 4-5, laga bilaabo 18 sano + baasaboorka;
Ma rabtaa inaad ku ciyaarto casino online? Waan kuu sheegi doonaa sida loo sameeyo tan - tilmaamaha tallaabo tallaabo tallaabo ah;
Bulgaariya: joqraafiyada iyo taariikhda, meelaha xiisaha leh ee Sofia, xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan dalka iyo dadka deggan.
Shuruucda Bulgaariya ku saabsan khamaarka - tixraac taariikheed
1979 Furitaanka casino ugu horeeya ee Sofia hotel "Vitosha"
1999 "Sharciga Khazart" waa sharci qeexaya khamaarka waddanka. Bixinta ruqsadaha Guddiga Qaranka ee Khamaarista. Asal ahaan, maal-galiyeyaasha maxalliga ah waxay xaq u leeyihiin inay furaan casin ah. Si aad u hesho liisanka shirkadaha shisheeye waxay u baahan yihiin inay iibsadaan hoteelka ugu yaraan 4 *.
2000 Shaqaalaha rikoodhada internetka waa inay ka helaan liisanka Guddiga Qaranka ee Khamaarka (SCG).
Sida rasmiga ah, kaliya casinos ee ruqsadaha ku jooga Bulgaria waa la ogol yahay.
Qaar ka mid ah casinos ee ajnabiga ah ayaa xannibay cinwaanka IP iyo xitaa kuwa haysta shatiga Midowga Yurub (taas oo dhab ahaantii ka hor imanaysa xeerarka Midowga Yurub ee ganacsiga xorta ah).
Sida waafaqsan shuruucda gobolka, shaqaaluhu waa inuu "jir ahaan" ku jiraa dhulka dalka, isaga oo leh canshuur gaar ah oo canshuur ka bixiya si uu u helo waddanka.
Haddii goobta ku taala dalka Bulgaria aan la xirin - ka dibna waxaa la heli karaa ciyaarta.
Casinos "land offline" oo ku taal Bulgaria
Casinoska xayawaanku wuxuu guud ahaan ka jiraa huteelada 4-5 iyo meelo gaar ah
Kantarool waxaa looga baahan yahay in laga helo liisan ka timi Bulgaria
Xaaladaha waajibka ah ee helitaanka casbarka ee Bulgaariya: da'da sanadka 18, helitaanka dukumentiyada aqoonsiga. Ma awoodi doontid inaad ciyaarto haddii aad ku jirto khamriga ama daroogada maandooriyaha, dhar isku soo gashay oo aad tahay shaqaale dawladeed ama aad xiriir la leedahay ganacsiga khamaarka (xataa xitaa qaraabada macaamiisha iyo shaqaalahaba looma oggola inay ciyaaraan).
Khadka Internetka ee Bulgaariya - Sida loo bilaabo ciyaarida ciyaaraha online-ka ah?
Waxaanu go'aansanay inaan abuurno tallaabo tallaabo tallaabo ah oo ku saabsan sida loo bilaabi lahaa cayaaraha casino online ah. Sida caadiga ah, casinooyinka ajnabigaa waxay isticmaalaan Ingiriisi caalami ah, sidaas darteed ugu yaraan aqoonta ugu yar ee aad u baahan doonto.
Iska hubi haddii khadadkaasi uu sharci ahaan ka yahay dhulka Bulgaria. Haddii casino aan lagu xakameynin dhulka dalka Bulgaria by cinwaanka IP, ka dibna waxaa loo heli karaa in lagu ciyaaro. Mararka qaarkood casinos ma aqbalaan ciyaartoyda ka yimaada Bulgaariya, waxa fiican in laga barto casino gaar ah ee adeegga taageerada. Adeegga noocan oo kale ah wuxuu ku yaal khadka internetka oo dhan.
Hubi khaanadaha casriga ah ee lagu kalsoonaan karo. Tani waxay u qalantaa inaad hubiso inaad:
Joogitaanka shatiga caalamiga ah ee khadka casriga ah (macluumaadka waxaa laga heli karaa bogga internetka ee casino ee degaanka dadweynaha);
Waayo-aragnimada cas casino ugu yaraan sanado 3;
Ka jawaab celin wanaagsan ciyaartoyda shabakadda;
Barnaamijka casino waxaa matalaya kuwa ugu muhiimsan ee ciyaaraha internetka (NetEnt, Playtech, Microgaming, iwm.).
Dooro habka lacag bixinta - casino waxay bixisaa doorasho kala duwan oo lacag bixin ah (VISA, PAYPAL, WebMoney, Skrill, Yandex ama kuwo kale) waxaadna xaq u leedahay inaad dooratid waxa kuu fiican. Intaa waxaa dheer, sii cayimaha xeerarka gelitaanka iyo ka-noqoshada miisaaniyada (mararka qaarkood lacag bixinta waaweyn ayaa lagu bixiyaa qaybo iyo wakhti go'an). Ha iloobin khidmadaha lacagaha iyo kombiyuutarada ganacsatada si ay lacag uga noqdaan.
Baro shuruudaha shaqada ee khadka:
Shuruudaha gunnada (wager) iyo barnaamijyada daacadnimada macaamiisha
Shuruudaha furitaanka xisaabta (casinos waxay u baahan tahay caddaynta aqoonsiga - midig.
Si taxadar leh u akhri shuruudaha casabiga:
shuruudaha gunnada iyo boobka,
shuruudaha diiwaangelinta (mararka qaarkood baasaboorka ayaa laga rabaa inuu xaqiijiyo xisaabta);
haddii aad u baahan tahay inaad soo dejiso barnaamijka oo aad ku rakibtid kombuyutarkaaga ama waxaad ku ciyaari kartaa barta shabakadda
shuruudaha loogu talagalay astaamaha farsamada
Dammaanad noocee ah ayaa damaanad-qaad ah ku sameeyneysaa casin-doonka? Aqoonsiga xogta SSL, barnaamijka ciyaarta masuulka ah, iwm.
Doorasho shakhsi ah iyo doorbidid
Khadkaan online-ka ah ma bixiyaa ciyaaraha xiisaha leh?
Miyaad jeceshahay naqshadaynta dharka? Wax kastoo mug leh ma yahay?
Ka dib markaad barato dhammaan qodobbada kor ku xusan, waxaad aadi kartaa ciyaarta. CasinoTopLists ayaa sidoo kale kugula talineysa inaad akhrido akhbaar ku saabsan xeerarka cayaaraha, nidaamyada iyo istaraatiijiyooyinka. Sidaas darteed si dhakhso ah ayaad wax uga baran kartaa ciyaarta, bangigaagu wuxuu ku jiri doonaa xakameyn wanaagsan.
Goobta Bulgaariya iyo taariikh nololeed oo kooban
Waddanku wuxuu ku yaalaa xeebta Badda Badda iyo xuduudaha dalalka sida Giriiga, Turkey , Serbia, Romania iyo Makedoniya. Markii ugu horeysey ee ku saabsan Bulgaariya waxaa lagu soo sheegay sanadkan 354. Tan iyo wakhtigaas, taariikhda waddankan ayaa ka dhacay munaasabado badan: waxay ahayd guusha Boqortooyadii Boqortooyada ee qarnigii XYXii, ka qaybqaadashada dagaalka Serbia intii lagu jiray dagaalkii koowaad ee aduunka, iyo ka qaybgalka dagaalkii labaad ee dunida. Germany . Bulshada casriga ah waxaa lagu aasaasay 1989 waxayna noqotay waddan baarlamaani ah. Hadda waddanku wuxuu u qaybsan yahay gobollada 28 oo leh caasimadda magaalada Sofia.
Bulgaria on khariidadda Europe
Alexander Nevsky Cathedral . Cinwaanka: Aleksandar Nevski 1 1000. Waxaa lagu dhisay 1912 wuxuuna ka dhex muuqdaa kaniisadaha kale iyo macbudka oo leh weynaantiisa. Awoodda - Dadka 5,000.
Matxafka Qaranka Qaranka . Cinwaanka: Vitoshko Lale Street 16, 1618. Halkan waxaa ku jira sawirada taariikhiga ah ee taariikhda qadiimka ah ilaa wakhtigayaga.
Sawirka Sawirka Qaranka . Cinwaanka: "Prince Alexandre I" # 1. Dadka jecel farshaxanimada waxay xiiseynayaan inay booqdaan sawirrada 50,000 ranjiyeynta caanka ah ee caanka ah adduunka oo dhan. Sidoo kale halkan waa bandhigyo farshaxan casri ah iyo fasalo mihnadeed.
Magaalada Zoo . Ciwaanka: Goobta Bartamaha waxay ku taalaa Simeonovsko Shosse boulevard. "Galbeedka galbeedka ee Srebarna waddada 1. Xuduuda 250 hektar waxaad ku kulmi doontaa waxyaabo badan oo qalaad iyo xayawaan aad u badan shimbiraha.
St. Sophia Cathedral . Cinwaanka: jidadka Paris 2. Tani waa kaniisadda, oo lagu dhisay qarnigii XNUM, magaca magaca caasimadda Bulgaria.
Xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan Bulgaariya iyo Bulgaariya
Sofia waa magaaladii ugu da'da weynaa ee dhammaan Yurubta;
Bulgaariya waa waddankii ugu horreeyay ee Slavic, kaas oo 865 qaatay Masiixiyada;
Alfabeetada Bulgaariya waa Cyrillic, oo la mid ah Ruushka, waraaqaha E, E iyo N kuma jiraan, laakiin waxaa jira warqad b, oo tani maahan calaamad adag;
80-85% ka mid ah wineska adduunka ayaa laga dhoofiyaa Bulgaria;
Deganayaasha maxalliga ah waxay u bixiyaan 40% canshuur ahaan;
Cuntooyinka la jecel yahay - banichka ama banitza (warqad dubista kala duwan oo laga soo gooyo brynza ilaa isbinaajka).
Kiselo mlyako - kefir qaran - wax lamid ah ma leh adduunka, maadaama la soo saaro marka lagu daro nooca bakteeriyada gaarka ah. In Japan waa dalab weyn waxaana loo tixgeliyaa inuu yahay "elixir mudada dheer";
Dadka reer Bulgariisku maaha mid waqti go'an iyo goor dambe la oggol yahay. Intaa waxaa dheer, dadkani waxaa lagu gartaa tayada xun sida xaasidnimo. Deriska ayaa aad u jeclaanaya in ay midba midka kale ka doodaan;
Baakistu waa qalab qaran;
Magaalooyinka damaashaadka waxaa inta badan ku yaal liiska dadka maxalliga ah iyo ajaanibta. Dabiiciga, qiimaha qiimaha waa wax xariif ah;
"Haa" oo ku yaalla Ruushka micnaheedu waa maya "Bulgaria" Taxaddar!
Ku saabsan casinos reer Bulgaria ah
Inta badan nasashadayda waxay ahayd magaalo yar oo la yiraahdo Bansko. Marka laga soo tago cabbirka ugu yar, waxaa sidoo kale laga soo xigtey sicirka qiimaha leh, dabeecadda quruxda badan iyo dareenka joogtada ah ee raaxo darrada. Tirada dalxiisayaasha waxay gaarsiisaa qiyamka cabsida; bakeeriga ayaa wakhti dheer ku mashquulsanaa hawada, wuxuuna si deg deg ah u gaadhay xaalad degdeg ah, burbur iyo jajab ah. Kalluumaysiga dalxiisayaasha ka yimaada waddamada Yurubta ah, oo ay weheliyaan caado-qosolka dadka maxalliga ah - inay ku sawiraan sawirrada qaraabada dhintay eek u yaal albaabada hore ee guryahooda. Si kastaba ha noqotee, dadka Bansko ayaa sidoo kale leh raxmad iyo saaxiibtinimo, guud ahaan, waxay ka soo horjeedaan jawiga sawir-qaadaha. Intaa waxaa dheer, waxaan jeclaan lahaa sida hal cunto oo maxalli ah oo leh cunta cuno leh, ka dib markii la cuno hilib weyn oo hilib ah, waxaa la igu keenay xisaab oo waxaan ku shubay khariidad khaas ah oo leh saameyn cajiib leh oo mindi weyn leh. Inkasta oo la sameeyo isla lacagtaas lama siin.
Hadda ku saabsan casino. In Bansko ay si daacad ah u dhib badan. Calaamadaha iftiinka leh ee soo baxa ayaa ah qarsoodi dheraad ah oo lagu dhejiyo mishiinka qiiqa badan. Sidoo kale, xitaa xulashada goobaha isku midka ah waxay ka baxayaan waxyaabo badan oo la rabo. Waxaan xasuustaa laba meelood, midna wuxuu ahaa hotel Vihren, kan kalena wuxuu ku faraxsan yahay Blitz. By habka, ee dhammaan xarumaha khamaarka ee Bansko uu eegay ugu ugu fiican, kuwa kale waxaa lagu kala soocay shaqaalaha wacan iyo joogitaanka elektarooniga ah roulette. Maamulaha maxalliga ahi wuxuu ku hadli jiray Ruushka. Waxa uu sheegay in Bulgaria waxaa jira kaliya casino caadi ah oo ku yaal Sofia iyo Varna.
Waa hagaag, weli weli ma gaadhin Varna, laakiin waxaan joogay Sofia. Ugu horreyntii, waxaan joogay Plovdiv. Arrimaha muhiimka ah, shaqada iyo duruufaha kale. Laakiin waan nasiib lahaa inaan haysto maalin xor ah. Waxay ku sugnayd oo keliya in la go'aamiyo sida loo gaarsiiyo caasimadda dalka Bulgaria. Anigu waan cabbi jiray, sidaas awgeed waa lagama-maarmaan in la qaato baabuur ijaar ah, safarka baska ayaa sidoo kale u muuqday farxad aan caadi ahayn. Laakiin wiil yar oo reer Ukaa ah oo reer Taras ah ayaa u yimid inaan badbaadiyo. Waxa uu ku noolaa Bulgaria ee 10 sano ah, sidaas darteed si uu u hadlo, wuxuu ganacsi ka sameynayaa halkan. Taras ayaa i soo baray Volodya, oo ka yimid Saratov kulul. Wadanka koonfureed, wiilka wuxuu helay guri labaad. Guud ahaan, wuxuu isku raacay inuu i soo qaato lacala la yaab leh. Dhinaca kale, Volodya ayaa qirtay inuusan waligiis Sofia ama casino, sidaas darteed safarkan waa sida xiiso leh aniga ahaan.
Waxaan nimid magaalada caasimadda ah ee Bulgaria, waxaa jiray wakhti yar, laakiin waxaan rabay in aan haysto waqti aan ku sameeyo. Iyada oo macaamiil ah, waxaan soo bandhigay dhowr dalxiis oo dalxiis oo muhiim ah, taas oo aan ku faahfaahin doono faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan boosaska kale, iyo fiidkii waxay tagtay casino. Waxaan ku guuleystey inaan booqdo seddex goobood: Princesses, Viva iyo London.
Casino Casino wuxuu ku yaalaa Rodina Hotel. Waa xarun macquul ah: habka caadiga ah ee roulette, poker iyo blackjack - kaliya jadwalka 9. Xawaaladaha waxaa lagu sameyn karaa doollar, euros iyo leva maxaliga ah. Chips waxaa loo oggol yahay in si toos ah loo iibsado miiska. Princess ma aheyn mid xun, laakiin wakhti ayaa soo baxayay, waxaana doonayay in aan arko wax badan.
Safarka labaad ee booqashada wuxuu ahaa casaankii Viva. Halkaa, dhammaan ganacsatada waa gabdhaha labbisto dharka cagaaran qurxoon. Gaar ahaan qeybta ugu muhiimsan ee ka mid ah maaddooyinka ayaa ah kuwa hooseeya, taas oo ah, inkastoo wax yar ka soo jiidashada ciyaarta, laakiin waxay bixiyaan raaxo madadaalo. Qeybtaan casino ah ayaa ah dadka ugu badan ee ku filan dadka iyo ajnabiga. Volodya iyo waxaan ku guulaystay inaan meel ka helo miisaan raqiis ah oo raqiis ah - inta soo hartey mashquul. Sidaa daraadeed waxaan ku qasbanahay inaan ka ciyaaro boosaska caruurta. Markaan nagu soo hor fadhiisto nin, markii ugu horeysay waxaan u qabsaday ludumkii gubtay ee reer Holand. Dhamaan inta uu ciyaaruhu socdo, wuxuu u fasaxay hadalo dareen ah oo ku qoran luqadiisa hooyo. Qeybta ugu muhiimsan ee ereyadeeda ma fahmin, ka dib markii Volodya uu sharaxay - ma ahayn mid fiidiyow ah, laakiin aabaha gabadha croupier ee dharka cagaaran oo leh qoorta. Inta badan waxa uu ka baryay inuu gabadhiisa ku soo laabto jaamacad, oo saameyn weyn ku yeeshay, muddadaa ayaa loogu yeedhay dhilleysi.
Waqti xaadirka ah ee gacmaha saacaddu ay dhaaftay kadib saqda dhexe habeenkii, Volodya iyo aniga ayaan horeba u dhaqaaqay machadka ku xiga. Casino waxaa la yiraahdaa London, waxaa na soo dhaweeyay hub furan oo ka tagay riyooyinka ugu quruxda badan. London dhexdeeda waxaa ku yaal khamaar club. Tours ayaa si joogta ah loo qabtaa halkan, waxaana lagu soo bandhigaa plazma hoolka caadiga ah. Marka laga soo tago shaashadaha telefishinka ku dheggan derbiga, waxa kale oo uu leeyahay jadwalka 13 iyo laba kale oo ku yaala aagga cambaareynta kooxda. Goobtaas waxaa ku yaala hoolka VIP-ka, hase yeeshee dhammaantood lama aqbalo. Xilligaas, shaqaalaha London way wanaagsan yihiin, laakiin way ka sii fiicnaanaysaa, kuma hadlin Ruush, laakiin Ingiriisi ama luqad kale oo ajnabi ah. Aqoonta luuqadaha ma fududa fududeynta fahamka, laakiin sidoo kale waxay kordhisaa heerka adeegga guud.
Sofia, waxaa jira casiinyo kale, laakiin intooda badan waxay yihiin hoolka mashiinnada dhejiska leh calaamado cad cad. Waxaa caddaatay in khamaarista Bulgaria aysan ahayn saxda ugu weyn, waxay aadaan culeyska nasashada dhaqanka, qofna kuma yimaado khaas ahaan casiino maxaliga ah, maaha wax Vegas ah. Waxa kale oo jira wax yar oo ka mid ah warshadaha, dabcan, laakiin aragtideyda guud waxay ahayd mid wanaagsan. Intaa waxaa dheer, waxaan soo dhameeyay safarkii saddex casiin ah ee ku jira qoraallada, inkastoo aan weyneyn, laakiin kharashka wadada iyo madadaalada ayaa si buuxda looga bixiyay. Sidaas darteed, haddii aad ku aragto Bulgaariya oo aad rabto inaad ciyaarto - waxaad si ammaan ah u aadi kartaa casino maxaliga ah, kaliya ha arko calaamadaha midabada leh.
0.1 Khamaarista Bulgaariya
0.2 Khamaarka online ee Bulgaria
0.3 Liistada Meelaha 10 Bulshada ee Bollywoodka Online
3 Khamaarista Bulgaariya
3.0.1 Shuruucda Bulgaariya ku saabsan khamaarka - tixraac taariikheed
3.0.3 Casinos "land offline" oo ku taal Bulgaria
3.1 Khadka Internetka ee Bulgaariya - Sida loo bilaabo ciyaarida ciyaaraha online-ka ah?
3.1.1 Goobta Bulgaariya iyo taariikh nololeed oo kooban
3.1.2 Bulgaria on khariidadda Europe
3.1.3 Aragtida Sofia
3.1.4 Xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan Bulgaariya iyo Bulgaariya
3.2 Ku saabsan casinos reer Bulgaria ah